Gov. Inslee wuxuu ansaxiyay Aagagga Fursadaha ee bulshooyinka guud ahaan Washington - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Gov. Inslee wuxuu ansaxiyay Aagagga Fursadaha ee bulshooyinka ku baahsan Washington
Gov. Inslee wuxuu ansaxiyay Aagagga Fursadaha ee bulshooyinka ku baahsan Washington
Naqshadeynta gaarka ah waxay siineysaa dhiirigelin canshuuraha dowladda federaalka ah horumarka meelaha dakhligoodu hooseeyo
OLYMPIA, WASH - Gov. Jay Inslee ayaa maanta ogolaaday tirakoobyo tiradoodu gaareyso 139 degmo oo ka tirsan 36 degmo oo loo aqoonsaday “Aagga Fursada”, taasoo u suurta galinaysa inay bixiyaan cashuur dhimis khaas ah oo federaal ah si loo dhiiri geliyo horumarka iyo shaqo abuurka. Eeg khariidada iyo liistada Goobaha Fursadaha ee dhowaan loo qoondeeyay Washington.
"Aagagga Fursadaha waxay leeyihiin awood ay ku bixiyaan kobcin baahi weyn loo qabo oo loo qabo bulshada lana bartilmaameedsado mashaariic horumarineed, xoojinta dhaqaalaha maxalliga ah iyo shaqo abuur," ayuu yiri Gov. Inslee.
"Xaaladda Aagga Fursadda waxay noqon kartaa aalad waxtar leh oo gacan ka geysata xoojinta bulshooyinkan iyadoo dhiirigelinaysa maalgashiga raasumaalka," ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Brian Bonlender. In kasta oo aan haysannay codsiyo badan oo ka badan kuwa la heli karo, waxaan aaminsanahay in aan ku dhammaannay isku dheelitirnaan wanaagsan oo magaalo-miyi iyo horumar dhaqaale iyo fursado guriyayn ah. ”
Barnaamijka Aagga Fursadda wuxuu ahaa soo-jeedin laba-geesood ah oo ka socota Congress-ka oo lagu soo daray Sharciga Joojinta iyo Shaqooyinka ee Mareykanka, oo u oggolaanaya guddoomiyaha gobol kasta inuu u qoondeeyo illaa 25 boqolkiiba diiwaangelinta u-qalma ee Aagagga Fursadaha. Maalgashiga lagu sameeyay lacagaha gaarka ah ee aagaggan waxay awoodi doonaan inay dib u dhigaan ama baabi'iyaan canshuuraha dowladda dhexe ee faa'iidooyinka raasumaalka.
Si aad ugu qalanto heerka Aaga Fursadda, tirakoobka waa inuu lahaadaa heerka saboolnimada ee ugu yaraan 20 boqolkiiba iyo dakhliga dhexe ee qoyska illaa 80 boqolkiiba dhexdhexaadka aagga. Wadarta tirakoobyada 555 ee ku yaal Washington ayaa la kulmay shuruudaha u-qalmitaanka, in kasta oo 139 keliya ay heli karaan magacaabista. Eeg Liiska Waaxda Hanti-dhowrka ee Mareykanka ee waraaqaha u-qalma.
Ganacsigu wuxuu kaqaybgalay daneeyayaasha gobolka oo dhan si loogu qoondeeyo magacaabista qaar ka mid ah gobolada iyo qabaa'ilka, iyo in la sameeyo hannaan tartan eex leh oo loogu magacdaray habab kale. Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodkan, guddoomiyuhu wuxuu ka codsaday Agaasime Bonlender inuu la shaqeeyo Lt. Governor Cyrus Habib iyo Khasnaji Duane Davidson si ay u horumariyaan talo soo jeedin ah qayb yar oo ka mid ah hababkan si gacan looga geysto gaarista saameynta dhaqaale ee ugu weyn ee suurtagalka ah iyo natiijooyinka maalgashiga wanaagsan ee lagu xoojinayo bulshada.
“Barnaamijka Aagga Fursadda waa hab hal-abuur leh oo lagu soo jiito maalgashi gaar loo leeyahay bulshooyinka halgamaya. Tani waxay leedahay awood dhab ah oo lagu kobcin karo dhaqaalaha aagagga juqraafiyeed ee maanta dareemaya in laga dhaafay barwaaqada guud ee Washington, ”ayuu yiri Davidson.
"Sidii dhaqaalaha Washington uu u xoogan yahay, hadana waxaa jira bulshooyin badan oo aan arkin faa'iidooyinka kobaca dhaqaalaha," ayuu yiri Habib. Magacaabistaan ​​federaaliga ah waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo maalgelin lahaa maalgashiyada gaarka loo leeyahay gobollada ku yaal guud ahaan gobolkeenna, taas oo u suurta gelin doonta bulshada inay ka faa'iideystaan ​​kheyraadkooda aan laga faa'iideysan si ay u keenaan shaqooyin, guriyayn, iyo horumar muhiim u ah gees kasta oo Washington ah. ”
Qofka lala xiriirayo: Penny Thomas, Xafiiska Saxaafadda Ganacsiga, (206) 256-6106
horumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeedAagga FursaddaXoojinta bulshada
← Golaha la-talinta Guddoomiyaha Dooro Washington NMA wuxuu iftiiminayaa xoogga aerospace ee gobolka oo dhan booqashada hantida warshadaha ee Spokane Wafdiga Gobolka waxay kuxirantahay teknolojiyad cusub, ganacsi cusub oo Jarmalka ah →